Maraykanka, 26 March 2018 page pageno
Isniin 26 March 2018
Dimuqraaddiga oo Guul ka Sheegtay Doorashadii Pennsylvania
Musharaxi xisbiga Dimuquraadiga ee deegaan ku dhow Pittsburg, gobolka Pennsylvania ayaa ku guuleystey tartankii doorashada Kongress-ka ee shaley ka dhacdey gobolkaasi.
USA: Dimuqraaddiga oo Sii Wadaya Baaritsta Ruushka
Mudanayaasha Dimuqraadka ee xubinta ka ah guddiga sirdoonka ee aqalka wakiillada ee Maraykanka ayaa sheegay inay si wadi doonaan baarista la xiriirtaa faragalinta Ruushku ku sameeyay doorashadii Maraykanka.
Trump oo Eryay Tillerson
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryayay Xoghayihiisii Arrimaha Dibadda Rex Tillerson, isagoo ku beddelay Agaasimaha Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, Mike Pompeo.
McMaster: Cadaadiska K.Waqooyi Waa Mid Shaqeynaya
La taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa Isniintii shalay sheegay in Maraykanka ay ka go’antahay inuu sii wado siyaasadda uu Kuuriyada Waqooyi ku saarayo cadaadiska xooggan ee dhanka hubka nugliyerka.
USA: Hooyo Dalbaneysa in aan La Musaafurin Wiilkeeda
Mustaqblka 92 qof oo Soomaali ah oo dabayaaqadii sannadkii hore dawladda Maraykanku isku dayday inay u masaafuriso Soomaaliya ayaan weli sugnayn, waxaana mar kale sii joogitanakooda waddankan sii kordhiyey xaakim ku sugan magaalada Miami ee dalkan Maraykanka.
Trump Iyo Kim Jong Un oo Pyongyang Kula Kulmi Doona
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqabaley inuu kula kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Pyongyang bisha May si ay uga wada doodaan sidii loo dhammeyn lahaa qatarta hubka Nukliyeerka kaasoo hore laga muujiyey walaac iyo rajo in xal laga gaaro ah.
Maraykanka oo Cunaqabatayn Saaray 2 Mintid
Dawladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogtay laba ka tirsan hoggaamiyayaasha mintidiinta ururka Al-Shabab ee ka hawlgala gudaha Kenya.
Lataliyihii Dhaqalaha ee Madaxweyne Trump oo Is Casilay
Aqalka Cad ayaa Talaadadi shalay ku dhawaaqay in Gary Cohn oo ah lataliyihii dhinaca dhaqaalaha ee madaxweyne Trump uu is casilayo.
Trump: Kama Noqon Doonno Kordhinta Canshuurta Birta Mareykanka La Keeno
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay in dawladda Maraykanku aysan ka noqon doonin qorshaha ay ku rabto in 25% ay ku kordhiso cashuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo Maraykanka.
USA: Baaritaannada Faragalinta Ruushka ee Doorashada oo si Xawli u Socota
Baaritaannada lagu sameynaayo in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashadii madaxtinnimada Mareykanka ee 2016 iyo in kale, ayayaa todobaadyadii ugu dambeeyay u socdey si xawli ah, waxaana baaritaannadaasi ay ku sii dhawaanayaan xilliga doorashada Kongereeska ee dhici doonta bisha November.
USA: Diblumasi sare oo Shaqada Wasaaradda A. Dibadda Ka Tagaya
Joseph Yun, wakiilka gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tagaya.